Nharaunda | Kubva kuLinux
Iyo yemahara software nharaunda inoumbwa neyemahara software vashandisi uye vanogadzira, pamwe nevatsigiri vemahara software kufamba. Izvi zvinotevera (zvisina kukwana) runyorwa renharaunda ino nemasangano makuru anoisanganisa.
1.9 Python Zimbabwe (PyAr)
2.5 Linux Vashandisi Mapoka (Spain)
3.4 Linux Vashandisi Mapoka - Mexico
5.1 Paraguay Linux Mushandisi Boka
6.2 Linux Mushandisi Boka - Uruguay
7.2 Peru Linux Mushandisi Boka
8.4 Linux Vashandisi Mapoka - Chile
8.5 Dzimwe nharaunda
10.2 Linux Mushandisi Boka - Ecuador
12.2 Linux Vashandisi Mapoka - Central America
USLA inomiririra "Vashandisi veSpanish Yemahara Software" Zvinogona kutaurwa kuti ndiyo "amai" yemasangano ese maFree Software muArgentina. Inounza pamwechete Mahara Software Mushandisi Mapoka uye akasiyana masangano, pakati payo pane ese akatsanangurwa pazasi.
Mamwe mapoka evashandisi ndeaya:
CaFeLUG: Vashandisi veLinux veFederal Capital.
YEMAHARA: Cordoba Linux Vashandisi Boka.
Linux Santa Fe: Linux boka revashandisi muSanta Fe.
LUGNA: Vashandisi veLinux muNeuquén.
gulBAC: Boka revashandisi veLinux veCentre yeProv. YeBs.
LUGLi: Mahara Software vashandisi boka reLitoral.
Gugler: Entre Ríos boka revashandisi.
LUGMen: Mendoza Mahara Software Mushandisi Boka.
LANUX: Lanús Linux boka revashandisi.
Iyo SOLAR Yemahara Software Argentina Civil Association yakavambwa muna 2003 nenhengo dzemahara software yekufambisa muArgentina. Chinangwa chayo ndechekusimudzira hunyanzvi hwetekinoroji, hwemagariro, hwetsika uye zvematongerwo enyika zvemahara software uye yakasununguka tsika, ichigadzira nzvimbo yakasikwa yemumiriri pamwe nekubatana kwevanhu, nzanga nemapurojekiti. Zviitiko zvaro zvikuru zvine chekuita nekuparadzirwa kweFree Software padanho rehurumende, mumasangano ezvevanhu uye nharaunda dzakasarudzika.
SoLAr inoshanda pamwe nenyika dzenyika dzakadai INADI (National Institute against Discrimination, Xenophobia and Racism), INTI (National Institute of Industrial Technology), ASLE (Makuriro eFree Software muHurumende), matunhu nemayunivhesiti. kubva kuArgentina.
Fundación Vía Libre isangano risingabatsiri rehurumende rakavambwa muguta reCórdoba, Argentina, iro kubvira 2000 rinotevera uye rinosimudzira zvinangwa zvemahara software uye rinozvishandisa mukuparadzira pachena ruzivo netsika. Pakati pezviitiko zvaro zvakasiyana kuendesa maFree Software mune zvematongerwo enyika, bhizinesi, zvedzidzo uye zvemagariro. Imwe yaro yepakati mitsara yebasa hukama nevezvenhau1 uye kufambiswa kwezvinhu zvekusimudzira ruzivo pazvinhu zvarinotaura.
Ndiyo Argentine Chamber ye Mahara Software Makambani. Ndiro chaizvo boka remakambani (vakazvimiririra nyanzvi –monotributistas zvakanangana- havana kuisirwa mukati memutemo weCAdESoL) yakavakirwa muArgentina Republic uye yakazvipira kuzvinangwa zveCAdESoL uye kune yemahara software bhizinesi modhi. Kuti ive chikamu, kambani inofanirwa kubvumidzwa nebhodhi revatungamiriri.
Gleducar chirongwa chemahara chedzidzo chakabuda muArgentina muna 2002. Uyezve, isangano rehurumende rinoshanda mumunda wedzidzo nehunyanzvi.
Gleducar inharaunda yakazvimirira inoumbwa nevadzidzisi, vadzidzi nevamiriri vedzidzo vanobatanidzwa nekufarira kwakajairika muboka revashandi, kuvaka kwekudyidzana kweruzivo uye nekuparadzirwa kwaro mahara.
Iyo purojekiti inoshanda yakatenderedza madingindira akasiyana siyana senge ruzivo rwemahara, dzidzo yakakurumbira, dzidzo yakatwasuka, kudzidza kwekushandira pamwe, matekinoroji matsva emahara uye inosimudzira kushandiswa kwesoftware yemahara muzvikoro semhando yekudzidzisa uye yehunyanzvi, iine chinangwa chayo chikuru shanduko muparadigm yekugadzirwa, kuvaka uye kuparadzirwa kwezvinyorwa zvedzidzo.
Iyo inoumbwa nenzvimbo yakazvirongedza-inodzidzisa nharaunda, yakaumbwa se NGO (mubatanidzwa wevamiriri) inopindura zvido nezvinangwa zvemunharaunda.
BuenosAiresLibre, inozivikanwawo seBAL, iboka rakazvipira mukuvandudza nekuchengetedza nharaunda yedhijitari network muBuenos Aires (Argentina) nenzvimbo dzakapoterera vachishandisa tekinoroji isina waya (802.11b / g). Iyo ine anopfuura mazana mashanu ma node ayo anotaurirana ruzivo nepamhanyisa.
Chinangwa cheBuenosAiresLibre kuronga dhata renzvimbo, yemahara uye nharaunda muGuta reBuenos Aires nenharaunda dzayo senge yemahara svikiro yekupa zvemukati, pakati pezvimwe zvinoshandiswa munharaunda yenzvimbo. Pakati pezvimwe zvirimo, network inosanganisira Wikipedia muSpanish. Kuwedzeredzwa kwenetiweki kunoyamurwa nekuparadzira uye nekudzidzisa zviitiko, umo zvavanodzidzisa kuunganidza maantena ane zvinhu zvakagadzirwa. BuenosAiresLibre inovandudza iyi samambure uchishandisa mahara software software
Yakagadzwa pa1st. Nyamavhuvhu 2007, Wikimedia Argentina chitsauko chemuno che Wikimedia Foundation. Anoshanda mukuparadzira, kusimudzira nekusimudzira zvemahara tsika zviwanikwa, kunyanya mukuparadzira mapurojekiti ane hukama neWikimedia dzakadai seWikipedia, Wikimedia Commons, Wikinews, pakati pevamwe. Muna 2009, raive iro boka raitungamira kuronga Wikimanía 2009 muBuenos Aires.
Mozilla Argentina ndiro boka rekuparadzira zvirongwa zveMozilla Foundation muArgentina. Ivo zvakanyanya vakazvipira pakuparadzira kushandiswa kwemapurogiramu epachena anogadzirwa neMozilla kuburikidza nesangano uye kutora chikamu muzviitiko zvakasiyana.
Python Zimbabwe (PyAr)
Python Argentina iboka revasimudziri uye vanogadzira mutauro wePython chirongwa muArgentina. Mabasa ake anosanganisira kuparadzira kuburikidza nehurukuro nemisangano, pamwe nekuvandudza zvirongwa zvinoenderana nePython nePyGame kana CDPedia, vhezheni yeWikipedia muSpanish paDVD.
Uuntu-ar iboka revashandisi veUbuntu, rinogara muArgentina, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu.
Chinangwa chake ndechekuparadzira zvakanakira Ubuntu mumamiriro ekutora chikamu, uko pfungwa dzevashandisi dzese dzinogamuchirwa kunatsiridza iyi inoshamisa yekushandisa system. Zvakare, pane yavo saiti iwe unowana anodiwa maturusi ekuti utange muUbuntu, zvinetswa matambudziko kana kungo chinjana maonero.
Iyo GNU Spain nharaunda. Ikoko iwe unowana hupfumi hweruzivo nezve iyo GNU Project uye yemahara software kufamba: marezinesi, kwaungawana nekurodha pasi GNU software, zvinyorwa, huzivi, nhau, uye nharaunda.
Chinangwa chikuru cheNational Federation of Mahara Software Makambani ASOLIF (Federated Mahara Software Masangano) ndeyekudzivirira nekusimudzira zvido zvemahara software mabhizinesi emasangano muTekinoroji nemusika webasa, kuburikidza nechizvarwa uye / kana kutsigirwa kwe mapurojekiti, pamwe nekurongwa kwezvirongwa zvekushandisa Mahara Software bhizinesi modhi, kuzadzisa kugadzirwa kwehupfumi nenzira ine mutoro.
Yakavambwa mukutanga kwa2008, ASOLIF nhasi inounza pamwechete anopfuura makambani zana nemakumi mashanu akagoverwa mumasangano masere ematunhu, izvo zvinoita kuti ive inotungamira kuburitsa yemahara software bhizinesi chikamu muSpain.
CENATIC iHurumende Public Foundation, inosimudzirwa nebazi rezvemaindasitiri, Tourism uye Commerce (kuburikidza neSecretariat yeTerecommunications uye yeInformation Society uye yeruzhinji sangano Red.es) neJunta de Extremadura, iyo zvakare ine Bhodhi rayo reMatirastii nenharaunda dzakazvimirira dzeAndalusia, Asturias, Aragon, Cantabria, Catalonia, Balearic Islands, Nyika yeBasque uye Xunta de Galicia. Iwo makambani Atos Chibviro, Telefónica uye Gpex zvakare ari chikamu cheBhodi reCENATIC.
CENATIC ndiyo yega chirongwa chehurongwa cheHurumende yeSpain kusimudzira ruzivo uye kushandiswa kweyakavhurika sosi software, munzvimbo dzese dzenzanga.
Basa reSiseko nderekuzvimisikidza senzvimbo yenyika yehunyanzvi, pamwe nekufungidzira kwepasirese muEurope neLatin America.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rakavakirwa muMexico, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu yakavakirwa paDianian GNU / Linux.
Linux Vashandisi Mapoka (Spain)
AsturLinux: Boka revashandisi veLinux yeLinux.
AUGCYL: Boka revashandisi veCastilla y Leon.
BULMA: Vanotanga Linux vashandisi kubva kuMallorca neZvakatenderedza.
GLUG: Linux Vashandisi Boka reGalicia.
GPUL-CLUG: Vashandisi veLinux neVanogadzirira - Coruña Linux Vashandisi Boka.
Kuende (KUE): Mushandisi Boka reCarlos III University, Madrid.
GULIC: Vashandisi veLinux veCanary Islands.
HispaLinux: Sangano reSpanish Linux Vashandisi.
IndaLitux: Almeria Linux Vashandisi Boka.
Lilo: Linuxeros Locos - Yunivhesiti yeAlcalá de Henares.
VALUX: Sangano revashandisi veLinux venharaunda yeValencian.
Iyo GNU Mexico nharaunda. Ikoko iwe unowana hupfumi hweruzivo nezve iyo GNU Project uye yemahara software kufamba: marezinesi, kwaungawana nekurodha pasi GNU software, zvinyorwa, huzivi, nhau, uye nharaunda.
Mozilla Mexico ndiro boka rekuparadzira zvirongwa zveMozilla Foundation kuMexico. Ivo zvakanyanya vakazvipira pakuparadzira kushandiswa kwemapurogiramu epachena anogadzirwa neMozilla kuburikidza nesangano uye kutora chikamu muzviitiko zvakasiyana.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rinogara muMexico, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu inoshanda.
Linux Vashandisi Mapoka - Mexico
Linux Mushandisi Boka - Chihuaha (GLUCh)
Linux Mushandisi Boka - Baja California Sur (GULBCS)
Linux Mushandisi Boka - Ensenada (ELUG)
Inounza pamwechete mayunivhesiti, vanamuzvinabhizimusi, hurumende, mapoka evashandisi, vabiridzi, masangano asiri ehurumende nevamiriri verusununguko rwezivo. Chinangwa chayo ndechekusimudzira kushandiswa uye kuvandudzwa kwemahara software seimwe yerusununguko rwehupfumi nehunyanzvi.
Paraguay Linux Mushandisi Boka
Iine maforamu, runyorwa rwekutumira, Mahara Software magirazi (kugoverwa mu .iso uye inogadziridza), kuitirwa kwemapurojekiti epasirese, magirazi ezvinyorwa masayiti (tldp.org, lucas.es), uye inobatanidza Linux InstallFests yakarongedzwa nemasangano akasiyana siyana . Uye zvakare, ine wiki yemapurojekiti uye zvinyorwa zvakatumirwa nevashandisi.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rinogara muUruguay, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu inoshanda.
Linux Mushandisi Boka - Uruguay
Iri boka reUruguay revashandisi veiyo GNU / Linux inoshanda sisitimu yemakomputa. Zvinangwa zvikuru zveboka ndezvekuparadzira mashandisiro uye zvinangwa zveGNU / Linux uye Mahara Software uye kuve nzvimbo yekuchinjana kwete chete ruzivo rwehunyanzvi, asiwo maonero pamusoro pehunyanzvi hunotsigira Mahara Software, iyo Code Vhura Sosi uye nezvimwe.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rinogara muPeru, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu inoshanda.
Peru Linux Mushandisi Boka
Zvinangwa zveboka ndezvekuparadzira iyo Linux inoshanda sisitimu, kusimudzira mashandisiro uye dzidziso; pamwe nekutsigira kuvandudzwa kweOpenSource munyika.
Iyo PLUG haiteedzere chero chinangwa chehupfumi, asi chete kushandira nharaunda yeLinux yePeru. Kutora chikamu mukati meboka rakavhurika kune vese vanhu nemasangano anoda kubatana nezvinangwa nezvinangwa zveboka
Iyo GNU Chile nharaunda. Ikoko iwe unowana hupfumi hweruzivo nezve iyo GNU Project uye yemahara software kufamba: marezinesi, kwaungawana nekurodha pasi GNU software, zvinyorwa, huzivi, nhau, uye nharaunda.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rinogara muChile, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino inoshanda system.
Mozilla Mexico ndiro boka rekuparadzira zvirongwa zveMozilla Foundation muChile. Ivo zvakanyanya vakazvipira pakuparadzira kushandiswa kwemapurogiramu epachena anogadzirwa neMozilla kuburikidza nesangano uye kutora chikamu mune dzakasiyana zviitiko.
Linux Vashandisi Mapoka - Chile
AntofaLinux: Boka reLinux Vashandisi veAntofagasta.
UCENTUX: Linux Vanoshandisa Boka reCentral University, Metropolitan Dunhu.
CDSL: Yemahara Software Kusiyanisa Center, Santiago.
GULIX: Linux Vashandisi Boka reIX Dunhu.
GNUAP: Linux Mushandisi Boka reArturo Prat University, Victoria.
GULIPM: Boka reLinux Vashandisi vePuerto Montt.
Mamiriro edesktop: GNOME Chile, KDE Chile.
Yemahara Technologies Vashandisi Boka (Cuba), inonyatso kuzivikanwa seGUTL, inharaunda yevanofarira OpenSource uye Yemahara Software mune zvese.
Nharaunda yeMozilla muCuba. Yakagadzwa uye inotungamirwa nenhengo dzeYunivhesiti yeComputer Sayenzi yeCuba.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rinogara muEcuador, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu inoshanda.
Linux Mushandisi Boka - Ecuador
Portal yakatsaurirwa kuparadzira kushandiswa uye zvinangwa zveGNU / Linux uye Mahara Software, uye nekupa masevhisi neruzivo zvine chekuita neGNU / Linux masystem.
Iyo GNU Users Boka reVenezuela iboka rinotarisana nekupa uye kuparidza huzivi uye fungidziro yeiyo GNU chirongwa uye iyo FSF (Yemahara Software Foundation) muVenezuela kuburikidza nekusimudzira, uye kushandiswa, kwezvirongwa, zvinyorwa uye zvinyorwa zvinoenderana nesoftware. mahara.
Iri iboka revashandisi veUbuntu, rakavakirwa muVenezuela, rakazvipira kuchinjana zviitiko uye nekugovana ruzivo nezve ino sisitimu yakavakirwa pane debian GNU / Linux.
Venezuela Linux Vashandisi Boka (VELUG) isangano rinopa mukana wehuwandu hweruzivo rwakanangana neGNU / Linux inoshanda sisitimu uye Mahara Software.
Nhengo dzayo dzinogadzira zvinhu zvakawandisa pane zvinyorwa zvetsamba. Zvese zvehunyanzvi zvinhu, mhedzisiro yemibvunzo nemhinduro zvakatsinhaniswa muVELUG, inowanikwa munzvimbo dzekare dzekuchengetedza tsamba.
Iyo Revolutionary Front yeFree Technologies (FRTL) iboka reruboshwe, rakanangana nekuparadzira, kusimudzira uye kushandisa matekinoroji emahara munharaunda yese, mukutsvaga kugovana nekukurudzira ruzivo runosunungura uye mupiro kune chakapihwa hutongi hwehunyanzvi. muChirongwa cheHomeland kubva kune hunhu hwehukama mumunda wesocialism yezana ramakore XXI.
Yemahara Software Central America nharaunda (SLCA) inzvimbo yemusangano yemapoka akasiyana akarongeka anoshandira kusimudzira nekuparadzira software yemahara muBelize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica nePanama.
Tauya pamwe chete kuti titaure, tibatanidze masimba, tigovane ruzivo uye zviitiko; uye pamusoro pezvose, kusimudzira shanduko inoenda kunharaunda uko rusununguko rwe software rwunobatsira mukugadzirwa uye kugovana ruzivo rwemahara.
Linux Vashandisi Mapoka - Central America
GULNI: Linux Vashandisi Boka muNicaragua
GULCR: Linux Vashandisi Boka muCosta Rica
GUUG: Vashandisi veUnix muGuatemala
SVLinux: Linux Vashandisi Boka muEl Salvador
Yemahara Software Foundation ndiyo amai veVose Mahara Mahofisi eSoftware uye yakasikwa naRichard M. Stallman kutsigira nekutsigira chirongwa cheGNU. Parizvino, inoisa mumaoko eFree Software mushandisi masevhisi mazhinji enharaunda kuti ikure uye ibudirire.
Kune mamwe masangano ane hukama neFree Software Foundation, iyo inogovana chinangwa chimwe chete ichiita basa rayo padanho repasi kana rekondinendi. Yakadaro nyaya ye Yemahara Software Foundation Europela Yemahara Software Foundation Latin America and the Yemahara Software Foundation India.
Aya masangano emuno anotsigira iyo GNU Project nenzira imwecheteyo inoita iyo Free Software Foundation.
Iyo isiri-purofiti sangano rinogara muUSA, iro rine basa guru rekubatanidza Software Rerusununguko Zuva kutenderera pasirese. Vashandi vese vanozvipira nguva yavo.
OFSET isangano risingabatsiri rine chinangwa chekusimudzira kuvandudzwa kwemahara software yakanangana nehurongwa hwekudzidzisa uye kudzidzisa mune zvese. OFSET yakanyoreswa muFrance asi iri rakasiyana tsika tsika nenhengo dzinobva kumativi ese epasi.
Iwe unoziva chero rakakosha sangano uye / kana nharaunda inoenderana neyemahara software iyo isina kutaurwa? Titumire yako kurudziro.